Izicwangciso ezi-4 zemini nobusuku behlobo | IBezzia
4 izicwangciso zeemini nobusuku behlobo
UMaria vazquez | 14/07/2021 10:00 | Ukuzonwabisa
Ngoku ukuba imozulu elungileyo ekugqibeleni ilapha, lixesha lokwenza uninzi lwehlobo. Njani? Ukonwabela izicwangciso esizifumana zinomtsalane kweyona nkampani intle. Kuba nangona ubhubhane usafuna ubulumko, zininzi izicwangciso zokwenza njalo sichitha emva kwemini nobusuku ehlotyeni ngaphandle kokulalanisa.
Uyawuthanda umculo ophilayo? Ngaba ukhetha ubugcisa? Yintoni oyithandayo kakhulu kukunandipha ukuphumla ngaphandle nakwinkampani elungileyo? Sinezicwangciso zomntu wonke. Ngokukodwa ezine zilungele ukonwabele njengesibini okanye nabahlobo ngaphandle kokuya kude kakhulu esixekweni.
1 Ubugcisa kunye nesidlo sangokuhlwa ukuya
2 Ukutya isidlo sangokuhlwa kunye necocktail
3 Umculo obukhoma
4 Ukuphuma kwiindawo ezisemaphandleni kunye nobusuku behotele
Ubugcisa kunye nesidlo sangokuhlwa ukuya
Imva kwemini yobugcisa ihlala iyenye indlela eyonwabisayo emva kwemini yehlobo. Jonga i-ajenda yesixeko sakho kwaye ukhethe umboniso wobugcisa onomdla kuwe. Thenga itikiti lakho kwi-intanethi kwaye wonwabe ngaphandle kokungxama, uthathe ithuba lomoya opholileyo weholo yomboniso okanye imyuziyam ecwangcisa ucamagushelo. Ngeyona mvakalanga yehlobo eshushu, ngaba sikhona isicwangciso esingcono?
Xa uphuma, yiya kwindawo ekwisixeko sakho ekulungiselela ukutya. Khetha umntu wonke athetha ngaye okanye lowo uhlala ufunda uphononongo olulungileyo malunga naye kwaye khange ube nethuba lokuzama okwangoku. Khetha eyona nto uyithandayo kwimenyu yakho kwaye unike ingxelo entle ngayo entsha kwi ibhalkhoni okanye ithala. Emva kwemini enkulu emnyuziyamu, akukho nto ilunge ngaphezu kokuba wonwabe kwaye wonwabe xa uhlala ekhaya, awuvumi?
Ukutya isidlo sangokuhlwa kunye necocktail
Isidlo sangokuhlwa sakusasa Kwibala lokutyela okanye ehotele Kubonakala ngathi licebo elihle emva kwemini yehlobo. Indawo ye-tapas inokuba sisimo esifanelekileyo emva kwemini nabahlobo, kodwa unokukhetha into esondeleyo ngakumbi ukuba uza konwaba ebusuku njengesibini.
Emva koko hamba uye kwindawo ene Imenyu ebanzi yokutya ukwandisa ubusuku. Uya kuba nexesha elingalibalekiyo. Ayinakuba yenye into ukuba sidibanisa imeko yehlobo, inkampani elungileyo kunye neecocktails zokutyikitya. Ngaba awuyazi indawo enjalo? Beka uGoogle emsebenzini okanye ubuze abahlobo bakho.
Kulo nyaka imithendeleko emikhulu ayizukukwazi ukubhiyozelwa, kodwa ukuba abanye basondele kakhulu kwizixeko ezikhulu bayasivumela ukuba sonwabele umculo odlalayo. Umnyhadala weJardins Pedralbes kunye Ubusuku beBotanical, e-Barcelona nase-Madrid ngokwahlukeneyo, zezona zithandwa kakhulu. Kodwa zikhona ezinye ezinje ngeLas Nights del Río Babel okanye i-Weekend Beach Festival ekwabonelela ngenkqubo yomculo enomdla kakhulu kwaye uziqhelanise namaxesha amatsha, uhambelana nawo onke amanyathelo okhuseleko ayimfuneko.
Ukuphuma kwiindawo ezisemaphandleni kunye nobusuku behotele
Ngaba ufuna ukunqamula kwisixeko esikhulu? Kufuphi nesixeko sethu kuhlala kukho iindawo ezininzi esingazaziyo. Ngaba awufuni ixesha elifanelekileyo lokubahlola? Thatha imoto balekela kwindawo esemaphandleni ekufutshane Apho unokuphefumla umoya omtsha kwaye uchithe imva kwemini yokuphumla uthabathe uhambo. Ngaba ungathanda into ekhethekileyo ngakumbi? Kukho inkampani kwindawo eququzelela ukukhwela ibhayisikile, ukukhwela ihashe okanye ukuhamba ngephenyane, fumana!
Ukugqiba amava Bhukisha ubusuku kwihotele esemaphandleni ukusuka kwindawo kwaye wonwabele ukuthula ekunzima kakhulu ukukufumana ngexesha lasehlotyeni ezixekweni. Uya kuvuka njengobutsha kwaye emva kwesidlo sakusasa esimnandi ungakhetha phakathi kokubuyela esixekweni okanye ngokungxama amava akho ngakumbi kwindawo oyikhethileyo.
Ezi zizicwangciso ezine kuphela zemibono ngobusuku nobusuku behlobo, kodwa zininzi ezinye! Kwisixeko ngasinye, unako ngokwezifiso izicwangciso zakho ngokwemisebenzi ecwangcisiweyo. Thatha i-ajenda yesixeko sakho; Uya kumangaliswa zizo zonke izindululo zokuzonwabisa ezikhoyo kwaye ongazi.
Ngaba uyaluthanda olu hlobo lwesindululo? Kungekudala siza kuzama ukukunika ezinye izimvo ezijolise kwabancinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Ukuzonwabisa » 4 izicwangciso zeemini nobusuku behlobo
Iseti yebrashi esetiweyo: Yenzelwa ntoni nganye?
Iindlela zokuba isibini sisebenze